Al-Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka raggii weeraray Saldhiggii Mareykanka ee Kenya | Allbalcad Online
Home WARARKA Al-Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka raggii weeraray Saldhiggii Mareykanka ee Kenya
Al-Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka raggii weeraray Saldhiggii Mareykanka ee Kenya
Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo ku saabsan weerarkii ay ku qaadeen Saldhigga Ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee dalka Kenya.
Muuqaalkan ayaa lagu soo beegay sanad kaddib weerarkaas, waxaana ka soo muuqanaya shan dagaalame oo weerarkaas fuliyay, iyadoo muuqaalka uu ka hadlayay Amiirka Al-Shabaab Axmed Cumar Abuu Cubeyda.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarkaas fuliyay ayaa saddex ka mid ah waxay u kala dhasheen dalalka Yemen, Itoobiya iyo Tanzania, halka labada kale ay ahaayeen Soomaali ka soo jeeda Gobolada Baay iyo Bakool.
￼Magacyada ragga weerarka fuliyay:-
Cali Maxamed Cali, waa Itoobiyaan kasoo jeeda Qabiilka Burj, wuxuuse ku dhashay, kuna barbaaray agaalada Nairobi.
Moulana Faruq Moulana (Ahmed Al-Muhajir) hoggaamiyihii kooxda oo u dhashay dalka Yemen.
Next articleWasiirka Amniga oo sheegay in la xirey nin bastoolad ku ridey dad banaanbaxayay